Maamulka degmada Caabudwaaq oo ka warbixiyay hawlo nadaafadeed oo ay ka wadaan magaalada. – Radio Daljir
Maamulka degmada Caabudwaaq oo ka warbixiyay hawlo nadaafadeed oo ay ka wadaan magaalada.
Seteembar 2, 2012 9:06 b 0
Caabudwaaq, Sept 02 – Maamulka degmada Caabud-waaq ee waqooyiga gobolka Gal-guduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa ka warbixiyay hawl-gallo nadaafadeed oo ay ka bilaabeen degmadaasi oo muddo aan helin qorshayn magaalo tan iyo burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya.
Gudoomiyaha degmada Caabud-waaq Cabdi Xasan Calas (Xassan Caabudwaaq) oo waraysi siiyay Radio Daljir ayaa? sheegay in qorshayaashaan dhanka nadaafada iyo bilicaynta degmada ay dhawaan bilaabeen,? ayna kaga qayb qaadanayaan dadka deegaanka,? gudoomiyaha ayaa xusay in aysan jirin gacan kale oo ay caawinaad-ka helayaan, waxaase uu carabku ku dhuftay arrintaan inay isku xil-qaameen shacabka deegaanka.
Mudane Calas,? ayaa tilmaamay inay wadaan dadaalo xooggan oo ay ku doonayaan inay kor ugu qaadaan nadaafada degmada isla markaana ay ku qurxinayaan fagaarayaasha iyo goobaha bulshadu ay ku kulanto ee magaalada.
Dhinaca kale, duqa degmada Caabud-waaq ayaa? qurba-joogta deegaanka ka dalbaday inay gacan ka gaystaan hawlaha loogu jiro hormarinta deegaanka oo ay tahay wax xil ka saaran, isagoo carabka ku dhuftay inay aad u hooseeyeen arimaha bulshada sanadihii la soo dhaafay balse hada ay wax badan is badaleen isla markaana ay jiraan waxoogaa hormara oo laga gaaray waxbarashada,caafimaadka ayna ku tala jiraan inay kor u sii qaadaan hormarada kale ee ay baahan yihiin bulshada deegaanka.
Degmada Caabud-waaq ayaa ka mid deegaanada ugu amniga wanaagsan gobolada dhexe ee Soomaaliya, inkastoo dhawaan ay ka dhaceen dilal aan sidaas u badnayn oo markii danbe ay xaliyeen maamulka Ehlu sunna waljamaaca oo ka arimiya deegaano ka mida gobolada dhexe ee Soomaaliya.
Bulshada ku dhaqan degmadaasi ayaa si weyn u soo dhaweeyay shaqooyinka uu bilaabay maamulka degmada Caabud-waaq oo dhawaan uu soo magacaabay madaxweyinihii waqtigiisu uu dhamaaday ee Shariif Sh Axmed.
Hawl-gallo lagu dajinayo xurguf ka soo unkuntay tuulada Xero-jaale oo hoos tagta degmada Gal-dogob ee Mudug oo soconaysa.
Guddiga doorashada M/Soomaaliya oo 9-dob oo sharuudo ah kasoo saaray doorashada madaxwaynaha.